राति सुत्दा मुखबाट अनायसै र्‍याल चुहिनु यी खतरनाक बिमारीको संकेत, तपाईको चुहिन्छ ? – Nepali in Australia
January 17, 2021 autherLeaveaComment on राति सुत्दा मुखबाट अनायसै र्‍याल चुहिनु यी खतरनाक बिमारीको संकेत, तपाईको चुहिन्छ ?
काठमाडौँ । मुखको र्याल् भोजनको पाचन प्रणलीको लागी महत्वपूर्ण मानिन्छ । र्‍याल मा एमाइलेज नामक पाचक पाइन्छ जोसले भोजनम उपस्थित स्टार्चलाई सर्करामा बदलदिन्छ ।हेर्दै रसिलो, झरिलो, स्वादिलो खानेकुरा देख्नै हुन्न, हाम्रो मुखमा पानी आइहाल्छ ।
यो आफैमा स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हो, जसले जुनसुकै बेला समस्या निम्त्याउन सक्छ । यो स्थितिलाई मेडिकल भाषामा हाइपर सालिवेशन भन्ने गरिन्छ । धेरै जसो अवस्थामा यो समस्या अस्थाई हुने गर्छ । तर कतिपय अवस्थामा यो न्युरोलोजिकल डिसअर्डर हुनसक्दछ । जसका कारण मुखबाट निस्केको र्‍याल रोक्नमा व्यक्ति असमर्थ हुन्छ ।यो समस्याले गम्भीर रोगको संकेत समेत गर्ने हुदाँ यदी कुनै व्यक्तिमा र्‍याल चुहिने समस्या भएमा तुरुन्तै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ ।
-सुत्नु भन्दा पहिले एक गिलास पानी पिउने र केही टुक्रा कागती मुखमा राख्नाले पनि मुखबाट र्‍याल निस्कने समस्या कम हुनसक्छ ।-पिठ्युतिर फर्केर सुतेमा पनि र्‍याल आउन बन्द हुन्छ ।-चिसोका कारण नाक बन्द भएमा वाफ लिएमा यसले नाकबाट सास लिन सहायता प्रदान गर्छ । जसका कारण मुखबाट र्‍याल निस्कने समस्या स्वत कम हुनथाल्छ ।